Slovenia Online Casino saịtị - Casino Bonus Codes
Online cha cha Daashi Codes > Slovenia Online Casino saịtị
(243 votes, nkezi: 5.00 si 5)
Loading ... Na January 2017, ụlọ ahịa ịgba chaa chaa na Slovenia bụ otu n'ime obodo kachasị emepe n'etiti mba ndị dịbu na Yugoslavia. Dịka iwu ịgba chaa chaa, ọ bụrụhaala na ndị na-ede akwụkwọ na lotteries enweghị oke nkesa na Slovenia, ụlọ ịgba chaa chaa dị n'ofe mba ahụ: site na ọgba chaa chaa mara mma na gburugburu ebe ndị njem nleta.
Ịgba Chaa chaa na Slovenia
Na January 2017 na saịtị ịgba chaa chaa n'ịgba chaa chaa na Slovenia bụ nke a na-agụnye lotrị nke mba Slovenia. Enwekwa ụzọ ámá Esteve na-arụ ọrụ n'okpuru nduzi ịgba chaa chaa Slovenia. Ebumnuche nke ego abụọ na-adọrọ mmasị ndị na-elekọta ụlọ, mana ịnweta saịtị ndị ọzọ na saịtị ntanetị bụ nke dị na mpaghara ọha na-enweghị ihe mgbochi ọ bụla. Otú ọ dị, anyị na-ahụ na ndekọ ụlọ ịgba chaa chaa anyị, nke yiri ka ọnọdụ a ga-agbanwe n'oge na-adịghị anya.
List of Top 10 Australian Online cha cha Sites
Ọgba chaa chaa saịtị na-anabata ndị egwu si Slovenia
Hụ ndepụta nke saịtị ntanetị n'ịntanetị nke na-anabata ndị ọrụ si Slovenia, ma nye ha egwuregwu dị elu ma dị mma. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche site na ntinye oghere na egwuregwu ndị na-ere chaa chaa na-ere site na ndị na-ere ihe dị otú a dị egwu NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Egwuregwu Egwuregwu, na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwekwara ike gụọ nyocha anyị banyere saịtị ntanetị n'ịntanetị, iji mara ọkwá kacha mma n'ịntanetị, ụgwọ ego na nhọrọ ịkwụ ụgwọ dị na ndị na-egwu Slovenia.
Slovenia - obere ala ọkara nke obodo Moscow, ma dị na ebe dị mma. N'ebe a, ị nwere ike ịnụ ụtọ mma nke Alps, ọdịdị dị ebube nke oke ohia na osimiri nke Oké Osimiri Adriatic. Mana ịgba chaa chaa, ndị mmadụ nwere ihe ha ga-eme na akuku a nke Europe, n'ihi na n'ọtụtụ nnukwu casinos dị na Slovenia.
Slovenia - ntakịrị ihe omumu na akụkọ ihe mere eme. Dịka ala dị iche iche kemgbe 1991;
Ịgba chaa chaa na Slovenia:
a na-ekwe ka casino na-ere ala;
E kwere ka casinos dị na kọmputa, ga-enwe ikikere ala.
Anya ise nke Ljubljana - isi obodo Slovenia, na adreesị;
Ebe Slovenia na obere akụkọ ihe mere eme
The Republic of Slovenia dị n'ime obi Europe. Ndị agbata obi nke obere obodo a Italy , Austria , Hungary na Croatia. Isi obodo bu aha aha - Ljubljana.
Ọnọdụ Republic bụ pụrụ iche pụrụ iche. N'ebe dị obere ị nwere ike ịga skiing, na-agagharị na ndagwurugwu ugwu ugwu dị iche iche na-agbada n'osimiri ndị dị n'ugwu, iji gaa ọtụtụ ọgba ma nwee mmasị na mmiri mmiri, gaa njem Oké Osimiri Adriatic, ma ọ bụ ịlaghachi n'udo nke oke oke ohia. Enwere ọtụtụ ntụrụndụ na ntụziaka dịgasị iche, na nnukwu mmepe nke ịgba chaa chaa.
Akụkọ Slovenia dị ogologo ma dị njọ, n'eziokwu, ọ bụ na 1991 ka e guzobere ala ahụ ma mata ya na 1992. Otú ọ dị, ndị mmadụ bi n'ógbè a ogologo oge tupu oge anyị. Taa, steeti nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ karịrị nde mmadụ 2. Ụdị gọọmenti - obodo nke ndị omeiwu, onyeisi obodo bụ president, taa ọ bụ Borut Pahzor. Ọrụ dị mkpa nke Prime Minister na-arụ, ugbu a na-ejide nke a post Miroslav Tserar.
Slovenia dị na EU, n'ihi ya, ego akwụmụgwọ bụ Euro. E kewara ókèala ahụ na obodo 210 na obodo 11.
Casinos na ịgba chaa chaa na Slovenia
E kwere ka ịgba chaa chaa na Slovenia, na casinos dị n'ọtụtụ obodo: Lipica, Portorož, Nova Gorica, Kranjska Gora. Na mgbakwunye na ndị bi n'ógbè ahụ na-abịa ebe a iji kpọọ ụmụ amaala nke mba ndị agbata obi - Austria na Ịtali. N'ezie, ịgba chaa chaa - otu n'ime ebe nkiri ndị njem nleta kachasị ewu ewu.
Akụkụ nke chaa chaa Slovenia bụ na enweghi ike igwu egwu na 100-200 euro. Ma ndị ọbịa bụ mgbe niile. Ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwu maka nnukwu stakes, ọ dị mkpa iji kọwaa ndị ọrụ nke ụlọ ịgba chaa chaa, bụ ebe a ga-akpọ gị ka ị gaa n'otu ụlọ ezumike VIP nzuzo.
Ebe mbụ na-aga maka ịgba chaa chaa bụ Nova Gorica, ụlọ ịgba chaa chaa ebe a na-eme ndokwa nlegharị anya. Na obodo a, e nwere 2 nke kasịnụ kasịnụ na Slovenia: Perla Casino & Hotel, Park Casino & Hotel. Kedu otu n'ime casinos kasị mma ụwa, ebe ndị a na-ahụ egwu, ndị ọrụ unobtrusive, ọtụtụ ụdị egwuregwu kaadị, ruleti , igwe oghere.
Ebe ọzọ ịgba chaa chaa bụ Kranjska Hill. Enwekwara 2-ama casinos: Korona, Casino & Hotel Kranjska Gora. Onyinye dị ala karịa na casino nke Nova Gorica.
Ịkwụsị na Portorož nwekwara ike ịgwọ onwe gị na egwuregwu nke kaadị, igwe ma ọ bụ roulette, obodo nwere 2 casinos: Casino Portorož, Grand Casinò Portoroz. Lipica, ndị ọbịa agaghị aga n'ahịa ịgba chaa chaa, na-eleta Nnukwu Casinò Lipica.
N'ezie, ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ọ bụghị naanị egwuregwu ahụ, kamakwa ọtụtụ ihe ọṅụṅụ dị nro. Ọtụtụ mgbe, na-agba ọsọ ngosi ihe nkiri ahụ na cha cha, ya mere ndị escort, ndị na-achọghị na-egwu, ga-abụ ihe na-eme.
Na Slovenia ndị mara nleta mara mma, ya mere, nkwụsị na-emelite mgbe niile. Ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu ga-enwe obi ụtọ na ha dịgasị iche iche, ga-enwe obi ụtọ blackjack na poker, nke ikpeazụ a na-anọchite anya ọtụtụ iche: ogbaaghara oasis, Texas Hold'em, 7 Card Stud Poker, Caribbean Poker, na ọbụna Badugi. Fans nke Punto Banco agaghịkwa ewe iwe. Jide n'aka na ị na-arụ ọrụ n'ụlọ mgbakọ ụlọ, na-asụkarị French.
Dịka na mba niile EU, ụlọ ọrụ na-achịkwa cha cha. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ uwe ejiji na njedebe oge, a na-agba ha ume ịmụta tupu itinye nleta ahụ.
Egwuregwu Online na Slovenia
Slovenia - mba nke oge a, ya mere, a na-egwuri egwu ọ bụghị naanị na cha cha chaa chaa, kamakwa na mebere. Na 2014, iwu ohuru, nke na-achịkwa ọrụ nke ndị na-arụ ọrụ, wepụtara akara nchịkọta pụrụ iche, bụ nke na-edozi onwe ya n'okpuru Ministry of Finance.
Ịrụ ọrụ ụlọọrụ ịntanetị ọ nwere ike ịtụkwasị obi, ebe ọ bụ na mmalite nke ọrụ a chọrọ ka ha nweta ikikere maka afọ 5. Na iji mee ule ahụ, ha na-ahụ oke ndepụta nke ọnọdụ a chọrọ. Ya mere, nchekwa na iwepụ ego echegbula. Maka nchegbu kachasị na chaa chaa chaa chaa chaa, Royal Panda Casino, All Slots Casino, Betvictor Casino, Betway Casino na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nkeji atọ. Adreesị: Tromostovje, Ljubljana. Nke a dị ebube, nke dị n'etiti ncheta mba, nwere ogige ndị na-agafe agafe na 3, gafere ọdọ mmiri Ljubljanica. Gaa na akwa nwere ike ịbụ na akụkụ ochie nke obodo ahụ, mechibidoro okporo ụzọ.
Tivoli Park. Adreesị: Tivoli Park, Ljubljana. Ọ bụ ogige kasịsị elu nke isi obodo ahụ, gbasaa n'ebe ugwu-n'ebe ọdịda anyanwụ nke ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme. Na mpaghara nke hectare 500 dị kpọmkwem Tivoli ogige ntụrụndụ na arboretum, ọdọ mmiri na ubi, ugwu na ugwu Rožnik Cone.
Katidral St. Nicholas. Adreesị: Dolničarjeva ulica, 1, Ljubljana. Katidral a nke Archdiocese nke Ljubljana, e wuru iji sọpụrụ Nicholas nke Myra. Ewughari ihe ncheta mba malitere na 1361 ma wuchaa ya na narị afọ nke 18.
National Gallery nke Slovenia. Adreesị: Puharjeva ulica 9 1000 Ljubljana. Nke a bụ isi ihe ngosi ihe nka na Slovenia, nke e guzobere na 1918. N'ebe a, a kpokọtara nnukwu nchịkọta nke eserese sitere na oge emepechabeghị.
National Museum of Slovenia. Adreesị: Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana. Ụlọ ihe ochie a kachasị ochie nke mba ahụ chịkọtara ọtụtụ ihe omimi, ihe eji achọ mma, ihe osise, eserese, ego.
Ezigbo mmasị banyere Slovenia na Slovenia
Slovenian - asụsụ archaic nke Europe, ọ ka na-ejide ọnụ ọgụgụ abụọ.
Ndị Slovenia na-ebili n'isi ụra ma na-alakpu ụra n'oge, mgbe 22 gasịrị, mba ahụ adịlarị izu ike.
Na Ljubljana, 13% nke ndị bi na-ebi ndụ.
Ọkara nke ókèala - ahia, na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ - na-edebe.
Slovenia bụ ọdụdụ kachasị nleta na Europe - Postojna, akụkụ nke tunnels ya mere onye agha agha Russia.
Na Lipica na 1580 na-agbagharị n'ubi, nke na-arụpụta lipitsianov - ịnyịnya ndị na-agba ọsọ, na-enye ụlọikpe ndị eze Europe.
Slovenia - otu n'ime mba ndị na-emepe emepe kachasị na Europe, e nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ Human Development Index - 0.892, ọ na-eto eto mgbe niile.
Slovenia na map nke Europe
0.1 Ịgba Chaa chaa na Slovenia
0.2 List of Top 10 Australian Online cha cha Sites
2.1 Ọgba chaa chaa saịtị na-anabata ndị egwu si Slovenia
3 Ịgba chaa chaa na Slovenia
3.0.1 Ebe Slovenia na obere akụkọ ihe mere eme
3.1 Casinos na ịgba chaa chaa na Slovenia
3.2 Egwuregwu Online na Slovenia
3.2.1 nkiri Ljubljana
3.2.2 Ezigbo mmasị banyere Slovenia na Slovenia
3.2.3 Slovenia na map nke Europe